लोकसेवा आयोगका परीक्षामा बहिनी पहिलो, दाजु दोस्राे ! – Koshi Sandesh
लोकसेवा आयोगका परीक्षामा बहिनी पहिलो, दाजु दोस्राे !
Koshi Sandesh२३ माघ २०७७, शुक्रबार १२:४५
काठमाडौँ – माघ १३ गते पूर्णिमा उपाध्यय, उनका दाजु केशव उपाध्यय र उनको सिंगो परिवारका लागि अविस्मरणीय रह्यो । यसको कारण थियो लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा पूर्णिमाको नाम पहिलो नम्बरमा र उनका दाजु केशव उपाध्ययको नाम दोस्रो नम्बरमा निस्कियो । यी दुई दाजुबहिनी उपसचिव पदका लागि आयोगले लिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका परीक्षार्थी थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।